ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်နေ တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၄) ခုရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ – Let Pan Daily
ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်နေ တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၄) ခုရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
Let Pan | June 16, 2020 | Knowledge | No Comments
ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နောက်ဆုံး အခြေအနေ…
လောလောဆယ် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့နေရာမှာ ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၄) ခုရှိပါတယ်။
CAMBRIDGE – FEBRUARY 28: Scientist Xinhua Yan works in the lab at Moderna in Cambridge, MA on Feb. 28, 2020. Moderna has developed the first experimental coronavirus medicine, but an approved treatment is more thanayear away. (Photo by David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images)
ဗိုင်းရပ်စ် အကောင်လိုက်သုံးစရာမလိုဘဲ messenger RNA ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက်လာသလို ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်တဲ့နည်းကို ကျင့်သုံးတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Phase II clinical trials ကိုရောက်နေပြီး Phase III ကိုတော့ဇူလိုင်လထဲစမ်းသပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ် (Phase I, II and III ဆိုတာတွေကလူတဖြည်းဖြည်းချင်းများပြီး စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်)။ Phase III ပြီးပြီဆိုရင် စထုတ်လို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးက ၂၈ ရက်ခြားပြီး နှစ်ခါ ထိုးနှံရပါတယ်။
၂။ University of Oxford and AstraZeneca
လောလောဆယ်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီး နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးပါ။ အအေးမိဗိုင်းရပ်စ်ကို မျိုးဗီဇအရ အားပျော့အောင်လုပ်ထားပြီး ကိုဗစ်နဲ့အသွင်တူတဲ့ ပရိုတင်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပါစေလိမ့်မယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်အကောင်လိုက်ဆိုပေမယ့် မျိုးမပွါး နိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ျရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Phase II ရော Phase III ရောကိုတပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပြီး ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်း သန်း ၄၀၀ ထုတ်လုပ်ဖို့ မှန်းထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း အလုံးရေ သန်း ၂၀၀၀ ထိ ထုတ် လုပ်မှာပါ။
၃။ Pfizer and BioNTech
ဒီကုမ္ပဏီက ကာကွယ်ဆေး (၄)မျိုးကို စမ်းသပ် နေတယ်။ နံပါတ် ၁ အမျိုးအစားလိုမျိုးပဲ messengerRNA ကိုအသုံးပြုထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်မှာ Phase II clinical trials တွေလုပ်နေပြီးတော့ ဒီနှစ်ကုန်မှာပဲ ကာကွယ်ဆေး သန်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်ဖို့ မျှော်မှန်း ထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ မှာတော့ သန်းရာနဲ့ချီ ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ Johnson & Johnson
နံပါတ် ၂ နဲ့ပုံစံတူတဲ့ ကာကွယ် ဆေးပါ။ လူတွေနဲ့စမ်းသပ်တာကို ဇူလိုင်လမှာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီးတော့ လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်လောက်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သူကတော့ ဘယ်လောက်မှာ ကာကွယ်ဆေးရနိုင်မလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
လောလောဆယ်အနေအထားအရ ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်က ထင်ထားတာထက်စောနေပါတယ်။ အစတုန်းက မှန်းထားတာက ၂၀၂၁ နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှ ကာကွယ်ဆေးရနိုင်မယ် မှန်းထားပေမယ့် အခုအနေအထားအရဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာ ကာကွယ်ဆေး ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ လောလောဆယ် တော့ သတိနဲ့နေကြရပါဦးမယ်။
ထီပေါက် ကိန်း ရှိ/မရှိ ဒီလိုလေး အလွယ် တွက် ကြည့်မယ်
ငွေနှစ်ရာပဲ ကုန်ပြီး ၂ ရက် အတွင်းပျောက်တဲ့ မဟာဒူးနာ ပျောက် ဆေးနည်းကြီး…
(၂၃)နှဈ ပဲ ရှိသေး တဲ့ သမီးလေး ကိုယျဝနျ ရှိနေ လို့ ကောငျလေး ကို ဖုနျးဆကျ ချေါခိုငျး လိုကျတဲ့အခါ
ကငျဆာရောဂါ မှ အသကျခမျြးသာရာ ရရှိခဲ့သူ အမြိုးသမီး မှ ထပျဆငျ့ဝမြှေတဲ့ ကငျဆာဆေးနညျး (မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …)